Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa });
Barbaachisummaan barreeyfama kanaa bal’inaan seenaa irratti waan kaa’amee jiruuf, Oromoon ani eenyu? Maddi koo eessa? Daangaan koo eessa? Firaa fi diinni koo eenyu kan jedhu hundi haala gahaatiin deebii quubsaa akka argachuu dand`uu shakkii hin qabnu.
Hamma kiyyoo kolonii jala hin seeniniti Oromoon sirna ittiin bulan kan mataa isaanii qabau turan. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Sirni kuniis bal’aa ture. Dhimma jireenya ummata Oromoo fuula hundaan kan ilaalu sirna siyaasa, aadaa diinagdee fi amantiiti. Sirna hawaasaa guutuu ture jechuudha. Sirni Gadaa sirnaa fi seera Oromoonni ittiin walbulchu, kan duulee roorroo ofirraa ittisu, kan dinagdee isaa ittiin tikfatuu fi dagaagfatu, akkaata inni itti waliin jiraatuu fi kan hawwiin dhala Oromoo cufa ittiin guutu ture.
Sirni kun haala Oromoonni tokkummaan isaanii laaffate kan itti roorrisaa turan Habashaa fi Affaar ofirraa deebisuu dadhabe keessatti, haala hawaasaa ilaalerraa, jaarraa 14ffaa keessa biqiluu jalqabee suuta guddatee deeme. Oromoota sirna akkasii jalatti qindeessuudhaaf yeroo dheeraa fudhate. Oromoota gosatti hiraman walitti fidanii sirna tokko jalatti walitti qabuun kufaatii fi ka’uumsaa yeroo dheeraa gaafate. Gara walakkaa jaarraa 15faa isa lammaffaa keessa sirna gutuun argamuu dandaye.
Sirna Gadaa keessatti wanni hundi gadaan wal ilaala. Lakkooysi yeroo, aadaan, amantiin, jireenyi hawaasaa, ittisni biyyaafi kkf hundi hidhata Gadaa qabu, fakkeenyaaf sadarkaalee Gadaa, goggeessa Gadaa, abaluu abaluu..jiru. kun, eegaa Gadaan sirna kabajamaafi guutuu akka ture mirkanessa.
Barii itti Gadaan sirna gutuu ture sana akka silaa tahutti galmeessuun hindandaymane. Hammi galmeeyfame baay’ee yaraadha. Sana keessaahillee irra guddaan kan baroota dhihooti. Waa’een isaa hammi beekamu baay’ee yaraadha. Guddinaan odeeffannoon argaman oduu afaaniin kan daddabraniidha. Isaaniis bakka bakkati garagar tahu. Sunillee Gadaan Caffe Caffetti deebi’uu haa agarsiisu malee, tokkummaa sirna kanaaf ragaa kan tahu haftee sirna kan Gadaa Booranaa har’aalee haga taheefuu hojjataa jiruudha. Kanaaf, waa’ee sirna Gadaarratti hangi hubatame xiqqaadha. Waliigalatti sirna kana caalatti hubachuudhaaf qormaata cimaa sirna Gadaa kan mul’isan armaan gaditti ilaalla
uunkaa jereenya hawaasaa siyaasaa sirna Gadaa aadaa sirna gadaa amantii sirna gadaa
c. Ilmaan jaarsaa fii ilmaan Kormaa
d. Sadarkaalee Gadaa fi Murnoota Gadaa
Qormaata Gadaa Oromoo bakka bakkaarratti godhameen lakkooysi Goggeessa gadaa bakka heddutti shan. Kan kanarraa adda tahees nijiraa. Fakkeenyaaf Boorana keessatti Goggeessa Gadaa torba qabaatu jira. Maqaan isaaniifi tartiibni isaaniia kopha kophaafi beekamaadha. Hoggaa Goggeessi Gadaa jiran tartiibaan deemanii raaw’atan gara isa jalqabaatti deebi’uudhaan marsaa tokko tahu. Goggeessi Gadaa tokko bakka heddutti waggaa 40 booda malee, hin deebi’u. Fakkeenyaaf Ituu keessatti Goggeessi Gadaa (missensi) jiran, Hormaata, Sabbaaqa, Dibbeessa, Fadataafi Daraaraadha. Kanneen tartiiba maqaa Gadaawwan waggaa saddeet saddeetiin deeman tahanii Daraaraan gaafa raaw’ate Hormaatatti deebi’a jechuudha. Yeroon kun itti raaw’atee deebi’ee marsuuf naannawuu marsaa Gadaa tokko taha. Marsaan Gadaa tokkoo waggaa 40 qabaata. Goggeessi Gadaa shanan, walitti marsaa Gadaa shanan jalqabarraa ka’anii tartiibaan deemanii xumuramanii marsuuf gara isa jalqabaatti kan deebi’an kun “marsaa Gadaa(Gadaa cycle)” jedhama.
Goggeessa Gadaa fi Marsaan Gadaa waan hiriyymummaafi aangoo polotika ilaaluun hariiroo murteessa qabu. Sanaas bal’inaan booda laalla.
Hiriyyaan warra goggeessi Gadaa isaanii tokko taheedha. Kana jechuuniis hawaasa Oormoo keessatti warrii waggaa Gadaa keessatti dhalatan hundii fi kan maqaan Goggeessa Gadaa isaanii yoo dulloomoo tahanillee wal’irraa bu’ee yookaa tokko tahee hiriyyaadha. Ijoolleen waggaa Gadaa 1-8 jidduu fi gaheeyyiin waggaa Gadaa 45-56 jidduu yoo Goggeessi Gadaa isaanii tokko tahe hiriyyaa tokko jedhamu. Marsaan Gadaa naannawutti walitti fidee ijoollee fi jaarsoolii hiriyyaa taasisaa. Marsaan Gadaa fi Goggeessi Gadaa akkanatti hiriyyummaa murteessu. Hawaasa Oromoo keessatti hiriyyaan akka obbaleeyyaniitti wal’ilaalu. Ayyaana gurguddaafi beekamoorratti hiriyyaan wal argee waliin turuudhaan walfaarsa. Jaalalti walii, walamanuun, waliif dhimmuun, walgargaaruun kkf hiriyyaa biratti jabaadha. Aangoo polotikaa keessatti paartii tokko tahu.
Kanaf, hiriyyummaan karaa hawaass fi polotikaa Oromootaa walitti hidhuudha. Waa’een hiriyyaa hoggaa akkas tahu, ijoolleefi ga’eessoota maaltu walitti fidee hiriyyaa godha? Gaaffiin jedhu ka’uun nimala. Gaaffi kana deebisuuf, nama Goggeessa Gadaa isaatiin Gadaa keenya jedha. Gadaa isaa faarsa, kabaja. Kanarraa akka ilaalcha polotikaa baraatti hubachuuf waan Paartii ilaaluun gaarii taha. Hawaasa keessatti paartiileen uumamtu turan jechuudha. Goggeessi Gadaa shanan paartiilee shan kan ijoollee fii manguddoota hiriyyaa godhuus paartii tokkicha waliin qabaachuudha.
sirna Gadaa keessatti Ilmaan kormaa fi Ilmaan Jaarsaa qoodameef beekama. Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. Warra aangoo polotikaa qabachuuf deemaniifi kanatti hawasa qooda. Kuniis, waggaa Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Carraan aangoo polotikaa keessaa qooda qabaachuufi dhiisuun isaa yeroo itti dhalaterratti hundeeyfama. Kanaaniis ilmaan Oromoo yeroo dhalatanirraa kaasee ilmaan kormaafi ilmaan Jaarsaatti qoodamu. Akkaataan qoodamaa kuniis, seera umamaa kan hordofu qaba.
d. Sadarkaalee Gadaa fi Murnoota Gadaa:
Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran
sadarkaa Gadaa jedhama. Sadarkaan Gadaa maqaa gurmuu waggaa dhaloota ilmaan kormaati jechuudha. Gurmuu kanaan akkaataan jiruufi jireenya dhala Oromoo hundaatu keessatti murtaawa. Ilmaan kormaatu keessa daddabran yoo tahellee, jirenya dhala Oromoo karaa polotikaa, amanti, aadaa, dinagdeefi waraanaafi kkf keessatti kan ilaalu addatti maqaa haaqabaatan malee akkaataan guddinaa, dalagaafii jireenyaa, kan ilmaan Jaarsaa wajjiin tokkuma. Karaa polotikaatiin garuu, garaagarummaa guddaatu jira. Tahullee sadarkaaleen Gadaa jiruuf jireenya dhala Oromoo mara calaqqisiisa. Sadarkaalee Gadaa garagaraa keessatti ilmaan Oromoo dirqama (dalagaa) adda addaatu isa eeggata. Yeroon isaas osoo hin gahinnillee waan beekamuuf sadarkaa itti aanuuf isa qopheessaa ture.
Dargaggoomni sadarkaa itti namichi toohannoo warraarraa hillee walaba tahaa deemuu fi warrarraa gaatee soch’auu dandayuudha. Akkasumas, yeroo itti jabina, beekumsafi jagnummaa ofii mul’isuu jalqaabniidha. Jiruu dhufataa deemuudhaan yeroo itti of dandayutti tarkaanfataniidha. Hawaasichaa bu’aa buusuufiis kan keessatti of qophessu. Dalagaarratti bobbahanii, loon fagaatanii bobbaasuu, ol’aantoota isaanii wajjiin deddeemuu, adamoo bahuufi bineessoota loonirraa ittisuudha.
Hawaasa Oromoo bara sirna gadaa keessatti, kun murna lolu ture. Waggaa 25 – 32 jidduu kan tahan dirqama loltummaa qabu. Namuu roorroo biyyarra geesse ittisuuf waan ittiin lolu- xiyyaas tahee, eeboofii gaachana mataa isaatii qopheeyfatee farda lolaas qabaate taha. Lolli argamnaan akka dhagayeen qophaawee walgurmeessee duula. Kanatti dabalee waan dhimma biyyaa ilaalan yeroo kanaa kaasee qorachuu dandaya. Sadarkaan kun, Tuulamaafi Ituu keessatti yeroo itti ilmaan kormaa aangoo qabachuuf of qophessan, sadarkaa 4ffaa tahuudhaani fi dirqama loltummaa qabaachuudhaan tokko yoo tahan kaanirraa kanaan adda bahu.
Bakka heddutti sadarkaa itti aangoo qabachuudhaaf ilmaan kormaa qophii barbaachisaa godhaniidha. Yeroo kana keessatti dhimma biyya, bulchiinsa, sera, aadaa, amantiifi seena dabre baratu. Waa’ee sirna Gadaa caalatti hubachuu dandayu. Haalli isaanii warra biyya bulchuu ykn qondaaloota Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Bakka warrii Gadaa itti murtii seeraa kennan, dubbii gosaa ilaalanfi marii godhanitti argamanii irraa baratu. Bakka aadaafi amantiitti argamanii sirna qalbifatu. Caffee yaa’ii Gadaarratti argamanii murtii kennuudhaan hojiidhaan of qaru. Hayyoonniifi manguddoonni biyyaarraa qoratanii barachuudhaan beekumsa isaanii bal’ifatu. Biyya keessa sossohanii ummataan walbaruu, akkanatti aangoo polotikaaf ofqopheessu jechuudha.
sadarkaa itti ilmaan kormaa aangoo polotikaa qabataniidha. Yeroo itti warri Gadaan isaanii geessee biyya bulchan, seera ilaalan, dubbii Gosaa furaniidha. Sadarkaa Gadaa kun Tuulama fi Ituu keessatti isa shannaffaadha. Boorana, Gujiifi Arsii keessatti ammoo, isa jahaffaadha. Ilmaan kormaa sadarkaa Gadooma Booranaa fi Gujii keessatti Gadaa; Tuulamafi Ituu keessatti Luba. Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu. Yeroo Gadoomaa:
Dhallii namaa akkaata itti naannoo isaa hubatee, itti jijjiiru qaba. Kana keessatti qooda, safuu, beekumssa, qaroomaa fi yaadumsi qooda guddaa kennu. Kun hundi dinagdeefi polotikaa sirna hawaasaarratti hundeeyfamau; kanneenirraa calaqqisa argamaniidha. Akkaataaan itti dhalli namaa naannoo isaa hubatee jijjiiru, daawwannoo dinagdeefi polotikaa kan tahe kun aadaa jedhama.
Hoodni, safuu fi amantiin sirna kana keessa ture hundi nama hunda biratti fudhatamee kabajama; sanii ala bahuun hawaasaa ala tahutti waan fudhatamuuf nam-tokkoo kaasee hamma maatiitti, maatiirraa kaasee hamma sabaatti qaama walii tahanii jiraatu. Akkaataan jireenya maatii, fuudhaafii heerumaa, hariiroon uumaa, baasiin gumaa, adabni seeraa cabsaniifi kkf hundi aadaa waan tahaniif fudhtamoo turan. Akka bara saniitti eenyulleen aadaa kana nifudhata. Murtiin du’aa yoo itti dabrellee namni sun aadaa waan taheef, beekee eegumsa tokko malee, taa’ee adaba isarritti raaw’atamu eeggata jedhamee himama.
Heeraafii seerri biyyaa akka aadaatti fudhatamee jabaata, kabajamaas, waan jiruufi jireenya ofii ittiin geggeeffatan taheef seeraafi heerri ni kabajamu jechuudha. Waan sirna kana keessatti tahan hundi akka aadaafii amala biyyaatti fudhatamee kabajama. Akkaataan qabannoo qabeenyaa itti loon bobbaasan, looniifi bishaan eelaa baasan, itti qotaniifi akkaataan itti waa horatanii dhimma ittiin bahan aadaa Gadaa keessatti gamtoomaafi marabbaatu calaqqisa. Namuu qabeenya mataa isaa qabaatee irratti mirga guutuu qaba. Kan dhabe, kan balaan uumaafi lolli dhaqqabe, kan dhukkubsateefi abaarri itti dhufe, hundaa suphuufi hadhaadhiyyuun beekamaadha. Har’allee Boorana keessatti “Buussaafi Gonfa” kan jedhamu aadaa osoo hin badin jiruudha. Namuu waan waliin horate waliin dhimma bahuurraa dabree hawaasa keessatti walbadhaasuufi walgargaaruun aadaa Gadaa keessatti beekamaadha.
Aadaa kanaafi kana fakkaatan ala bahuun hawaasa keessaa nama baasa. Jechuun adaba namarratti seeraan dabru malee, waan halaba (out-casted) nama taasisan jiru. Isaan keessaa haraamuu, caphanaa,fikkf beekamoodha. Namni haraamuu, caphana,.. jedhamee gosa keessaa bahee namummaa dhabee kophaa jiraata; kophaa godaana, qubata. Gargaarsi hawaasummaa keessati godhamuuf irraa dhaabbata. Gatamuun kana fakkaatan waan jiraniif namuu aadaa Gadaa keessaa kabajee jiraata.
Sirna Gadaa keessatti yeroo garagaraatti aadaan jireenya hafuura ilmaan Oromoo calaqqisan jiru. Isaan keeessaa, ayyaanootni beekamoon kabajamuun waan jiraatani. Ayyaanoota kana keessaa kan sirna Gadaa keessaa jireenya polotikaa ilmaan Oromoo calaqqisu ayyaana buttaati. Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon polotikaa Gadaa tokkorraa kanitti dabru, ayyaana kanarratti horiin (loon) qalamanii, nyaachisni guddaan godhama. Sirba, tapha, faaruufi wanni kana fakkaatan ayyaanicha ho’isan addatti beekamoodha. Ayyaana buttaa malee, kanneen sirna kana fakkaatanii maqaa mataa isaanii qaban sadarkaa oliiti dhaabbata tahanii yeroo beekoomaatti kabajaman hedduudha. Isaan keessaa garii maqaa dhawuuf:
Boorana keessatti ayyaana Guduruu buufachuufi qumbii walirraa fudhachuu. Arsii keessatti ayyaana baraartiifi guduruu, gurra uraafii jaarraa qaluu Tuulam keessatti ayyaana dhagaa kooraafi jaarraa Gujii keessatti ayyaana bantii haaddachuu Kanneenii alattiis, cidhni gargaraa yeroo beekamootti bakka bakkatti godhamu, amantiiniis qaama aadaa hawaasichaa waan taheef, ayyaanni amantii sirna Gadaa calaqqisan bakka hundatti godhamaa ture. Ayyaana kana namuu Qaalluu (geggeessaa amantii) muuduudhaan eeyba kadhata, waaqa (rabbi) isaa galateeyfata; biyyaaf nagaya kadhata; hormaatarratti milkaa’uufi ilmaan isaa, uummtaafi mataa isaaf, fayyaafi jireenya kaadhata. Eegaa, kun aadaa amantii sirna Gadaa keessaa isa tokko. Aadaa Oromoo kan bara sirna Gadaa keessatti yeroon baay’ee barbaachisaadha. Guyyaa, ji’a (baati), waggaafi Gadaa lakkaawuudhaan hawaasa Oromoo sirna kan jalatti qindeessuun qaama aadaa ture. Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. Kalandariin Oromo kuniis, astronoomiin kan qoratamee argameedha. Ji’a waggaa dhaloota, bara Gadaa, guyyaafi ji’a ayyaanaa lakkaawanii add baafachuuf tattaafii qormaata ji’a, urjiifi aduu irratti godhamaniin qarooma Oromoota adda godhuufi dagaagina argameedha.
ba’uu, seenuufi guddina addeessaa (ji’a) lakkaawuu bakka, teessuma, mul’ina urjiilee keessaa buusaa, bakkalcha, to’achuufi jala bu’anii hordafuudhaan tahu.
Amaantiin Gadaa ummanni qabaatu keessaa tokko waan sirna Gadaa keessatti hojjetaman aadaa tahee qaama Oromootaa akka ture olitti kaafneerra. Innis waan sirna sana gadi jabeesse akka tahe hubatamaadha. Aadaa jiran keessaahiis amantiin hordafamaa ture, sirnicha utubee kan jabeesse dha. Amantiin aadaa haatahuu malee, mataa isaatiis sirna Gadaa keessatti waan aadaa tahan hundaa kan jabeesseedha. Kanaaf amantii fi aadaan tokkummaa akka qaban ifaadha.
Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. Innis waaqa jedhamee yaamama. Waaqni waan hundumaa ol kan tahe, hunda kan tolcheefi kan uume, waan hunda kan dandayuhuu isaatti amanama. Ormootaafi waaqa kana kan walqunnamsiisan qaalloota jedhamu. Hojiin isaaniis akka qeesotafii sheekootaati.
Qaaloota yeroo jennu akka bara dhihoo keessa ummata samuuf jecha sobanii, gowwoomsanii irraa waa guurratan akka qaallichaa Habashaa miti. Qaalloonni Oromoo bara sirna Gadaa ummata, uumamaafi biyyaaf waaqa kadhatu; galateeffatu, ummata eeybisu, looniifi madhaaniif rooba kadhatu, warra bira dhaqanii waaqa kadhachuuf isaaf muudaniif eebba keennu. Dalagaa kana fi kana fakkaataniin akka ummanni amantii Waaqatti amanuufi hordofu godhu; ummataafi Waaqa walqunnamsiisu.
Oromoonni karaa Qaalluu Waaqaan walqunnamuu malee, akkaataa biraas niqabu. Kuniis yeroo garagaraarratti ofiis waaqa kadhachuu fi galateeyfachuudha. Bakki itti waaqa kadhatan, galateeffataniis galma ijaarame keessa, muka jala, gaararraa malkaa gubbaa,dha. Kanneen utuu kana godhanii, yeroo yerotti dhaqanii Qaalluu muudu. Ayyaanni amantiis yerootti ayyaaneeffataman nijiru. Isaaniis warraa akka
Ateetee- Kan dubartootaati. Inniniis kan mucaa argachuuti. Nabii – Kan abbootiiti. Jaarri ayyaana nagayaa, tikfama namaa, looniifi qa’eeti. Abdaarrii-ayyaana dachii midhaan baasisuuti Qaallonniis sirna ayyaana amantii kanarratti ummata gorsu, jajjebeessu. Qaalluun eessaa baha? Gaaffiin jedhuu ka’uun nidandaya. Gosa keessaa Qaalluun bahuu dandayuufi hin dandeenye jiru. Iniis waanuma hangafummaafi quxxusummaa hawaasa Oromoo keessa turerraa tahuun nimala. Qaalluun gosa beekamaa keessaa baha. Achi keessaa bahee gosoota hafniifiis Qaalluu tahu. Hundaaniis muudama. Qaalluun gosa beekamaa keessaa haa bahu malee, tokko qofa taha jechuumiti. Maadhee hawaasa olii sana keessaa dabalanii jiraachuu dandayu. Garuu isaan keessaa tokkootu hundarra kabajaa qabaata. Isaanutuus yeroo ayyaanaa muudatti muudamaas. Fakkeenyaaf Boorana keessatti Qaalloota (laduu) shana jiran kan Maxxaarrii sadaniifi kan Karrayyuu tokkoofi kan Odituu tokko keessaa hunda caala kabajaman Qaalluu Odituuti.
Sirna Gadaa keessatti muuda Qaaluu kan yeroo malee, ayyaanni guddaan muuda jedhamu jira. Innis jidduu Gadaa tokkootti yeroo (si’a) beekamaafi dhaabbata tokkotti yaha. Ayyaana kanarratti Oromoonni dhaqanii galma isaatti qaalluu olii muudu. Sirna tahu keessatti yeroo kanatti eeyba Qaalluu fudhachuun beekamaadha. Namoonni lafa fagoorraa ka’anii dhaqan, ganda isaatti muudu, achitti qalanii nyaatu, nyaachisuusi.
Qoodni Qaalluun qabu kan biraa aadaa Oromoo kan sirna Gadaa keessaa tiksuu fi too’achuudha. Kanarratti bakka guddaa qaba. Akka aadaan sirna kanaa hin dabnefi seerriifi heerri sirnichaa hin banne qaceelcha. Ummata biratti karaa aadaafi amantii fudhatama guddaa guddaa waan qabuuf, yaada ummataa (public opinion) dhufata isaa jalaa waan qabuuf aadaa Oromoo tiksuufi daandii sirna Gadaarratti too’achuu dandaya. Waan haraamuu, caphana, gatama namatti fiduu dandayanirraa ummata eegu dandaya.
Kanneenirratti dabalee qoodni guddaan Qaalluun qabu jireenya polotikaa sirna Gadaa too’achuufi qajeelchuudha. Murtii polotikaarratti fuulaan yoo qooda hin fudhannellee, waan yaada ummataa of harkaa qabaniif qajeelchuufi karooraratti qooda guddaa kennu. Filmaata qondaaloota Gadi marii biyyaarratti argamuudhaan gargaaru. Filmaata qondaaloota Gadaarratti yaada ummataa sassaabuudhaan irratti hundeeyfamanii ija filmaata godhamee adda baasanii labsu. Marii seeraa fi heeraarratti argamanii akka seerrii fi heerri Gadaa hin dabneef gorsuu fi qajeechuudha. Qoondaaloota Gadaa aangoo qabatan sirnaan muudu, eeybisu. Kanaaf, amantiin sirna Gadaas karaa kanaafii kana fakkaataniin jireenya polotikaa ummata Oromoo qajeelchuurratti qooda guddaa qaba.
qooda amantii – namafii waaqa walqunnamsiisuu qooda aadaa- aadaa sirna Gadaa eeguuf, tiksuufi too’achuu qooda polotikaa- filmaatarrattii fi marii biyyaa kan seeraa fi heeraarratti too’achuufi qajeelchuudha.
Ummata akka waan hinsossoonee kana akka gaarra, dhagaa ykn galaanaa godhanii fudhachuun hin tahu. Ummatni kamiyyuu ni sossoha, bakka takka gadhiisee bakka biraatti ni godaana. Seenaa ummatoota addunyaa keessatti godaansa heedduu argina. Sababootii godaansaa uuman akkuma biyya sanaafi haala yeroo sanaarratti hudeeyfama. Kanaaf sababootii godaansa uuman bal’aafi hedduudha. Haa tahuu malee, warri keessaa gurguddaa tahan nijiru:
Madda ummata Oromoo yeroo ilaalletti Oromoon Baddaa Baaleefi gam tokkoon Sidaamoo keessa yeroo dheeraaf akka jiraataa ture mirkana’ee jira. Kana jechuun Oromoon hangaa jaarraa 16ffaa keessatti naannoo kana duwwatti murtaa’ee jiraataa ture jechuumiti. Godaansi ummata kamiyyuu ballama qabatee jaarraa akkasiitiin godaana hinjedhu. Godaansi sossohiinsa ummata dhawaataan, suuta suutaan, yeroo dheerinaa keessa kan mul’atudha. Waan jaarraa tokko keessatti jalqabee dhumatuusiimiti.
Herbert S Luwis madda saba Oromoo argacuuf afaanoota Kushoota bahaa bakka 24tti qoode. Afaanoota isaanii karraa kan ka’e, durattii isaa kun lammii tokko turan jedhe. Yeroo dheeraa keessa lakkooysii namaa babal’achurraa kan ka’e walirraa fagaatanii qubacuun, lammiin adda addaa dagaagan. Walbiraa godaanuun isaanii kun yoomifii akkamitti akka jalqabameef wanti beekamu hinjiru. Sababnii isaa garuu, waa asii olitti ka’erraa tokko tahuun nimala.
Lammiin affaariifi Saahoon dura godaanuu waan jalqaban fakkaata. Gara kaabaatti baay’ee fagaatanii kan qubatan, isaan kana. Lammiin kun lameen, yeroo dheeraaf waliin jiraataa turanii booda foxxqanii akka qubataniidha. Bara dhihoo dura akka waliin turan, afaan isaanii walitti seenuun ragaa nitaha. Lammiin Somaalee itti aanee sossohee waan gara bahaafi kibbaa qubate fakkaata. Har’a Somaaleen Oromoorraa gara bahaafi kibbaa, Affaarirraa ammoo, gaara kibbaa qubattee jirti. Akka Herbert S. Luwis jedutti isaan kanatti aanee kan godaane Oromoodha. Affaar, Sahoo,Somaaleefi Oromoon hoggaa naannoo sanarraa sossohan Kuushootni bahaatti hafan ammoo, naannoo ha’a irra jiraatan keessa babal’atan malee hedduu hinsossoone.
Ormoon naannoo Mandayyoo, Dallofi Jamjam bara dheeraa jiraataa turanii dhawaata lafa naannoo isaaniitti siqaa, irra jiraataa dhufan. Yeroo isaan itti naannoo Baaleefii Saidaamoorraa sossohanii hamma Wallootti qubatan waan beekamuu miti. Garuu yeroo dheeraa keessa tahuun hinmamu. Eega Affaarootnifi Saahootni naannoo amma jiran keessa jiraachuu jalqabanii ykn, isaanumatti aananii godaananii qubacuun waan malu.
Booranni biyya isaarraa yeroo godaanu hundaan hindeemu, warri deemuu fenne ni hafa. Kuniis waan mootii hinqabneef namni isaan ajaju hinjiru. Abbaan akka barbaade hojjata” jedhe. Bartels namchi jedhamu ammoo, akkaata godaansa Oromoorratti yeroo barreeyse: nama Oromoo tokko gaafatee deebii argate:
Yeroo tochoonu, ilmi hangafni bakka itti dhalateetti hafa. Ilmi quxxusuun dabranii lafa haaraya barbaadu. Ilmaa warra hangafaa naannotti hafan ammoo, firoota isaanii barbaaduu ka’anii godaanu” jedhee jira. Ragaa kana lamaan irraa kan hubachuu dandeenyu, Oromoon godaanee daangaa Keeniya kaasee hamma daangaa Tigreetti qubachuu kan dandahee, yeroo dheeraa keessa akka tureedha. Jaarraa 16ffaa keessa yeroo Baahireen barreeyse baayyinni ummata Oromoo meeqa taha? Akaa inni jedhutti utuu godaansi Oromoo yeroosunii jalqabee ilmaan quxxusuu duwwaan dabranii kan qubatan yoo tahee, lafa har’a Oromoon irra jiraatu firfirsanillee wal hingayan jechuudha. Kanaaf Oromoon jaarraa 16ffaa keessa godaanuu jalqabee utuu hintaane, jaarraa hedduun dura suuta suutaan, ilmi quxxisuun dabree qubachaa, lafa margaafi bishaan qabu barbaadaa godaane. Haalli jaarraa 16 ffaa keessatti mul’ate waan gara biraa waan taheef bakka isaatti laalla.
Goso tokko keessa karra hagafaafi quxxusuu nijiraatu. Maanguddootni karra hangafaa keessa jiran biyya (gosa) bulchuurratti qaceelfama kennu. Karri quxxusuu tahan warra hanagafa kana jalatti gurmaawu. Sadarkaa gossaattiis hariiroon kun ittifufa.
“lolli Kiristaanoota Habashafi Islaamoota ture, Poortugaal gargaartee Imaam Ahmed mohamullee hin dhaabbanne. Waggootii dheeraaf dabree dabree deemsifamaa ture, gaallaa (Oromoo) haala kana duukaa bu’anii too’ataa turan. Gartuun lamanuu waan miidhameef lafa isaanii deebifachuuf yeroo itti eeggachaa turan”jedha. Lolli amantii yeroof akkasiit qabbanaawullee Oromoon lola isaa itti fufe. Muudanni Gadaa isaa fixee Kiiloleetti dabarse.
Kiiloleen duula bal’isee DAWAAROO rukutuu jalqabe. Yeroo gabaaba keessati handhuura Dawaaroo gahe. Galaawudoos mooti Habashaa waana isaa kan nama Adaal Mabraq jedhamuun hoogganamu Dawarrootti bara 1545tti erge. Waraanni Adaal Mabraq harka Oromootti baqe, iniis baqatee laga Awaash cehe.Dawaaroo kan jedhamu Arsii har’aatt akeekuun ni dandayama. Galaawudoos Islaamoota mohuu dandahullee Oromoo biyya isaaf lolu mohuu hin dandeenye. Kiiloleen Gadaa isaa fixee Biifoleetti dabarse.
Galaawudoos Adaal Mabraq moohamuu dhagayee humna isaa waliti gurmeessee, waraana warra Poortugaaal forguugsee Oromootti bara 1548tti duule. Humna guddaan itti haa duulu malee, Galaawudoos Oromoo mohuu dadhabee, dahannoo jabaa qotatee Dawaaroo keessa qubate. Oromoonni achitti iti marsanii lolan. Lolli sun guyyaa kudhalama deeme. Oromoonni gootummaan lolanii gaafa 12ffaa waraana Habashaa dahannoo isaa keessatti itti seenaanii hedduu irraa fixan. Ajajaan waraana Poortugaal Ayrees Deez jedhamu madaawee boodarratti du’e. Waraanni Habashaa moohame. Biifoleen duulaa isaa itti fufef Awaash cehee Faxagar waraanuu jalqabe. Hatahuu malee, Biifoleen akka Luboota isa duraa lafa haaraya qabachuudhaan hin milkooyne. Habashoonni dhiibbaan Oromoo gara qa’ee isaaniitti dhihaataa waan deemeef jabaatanii dura dhaabbatan. Galaawudoos humna Habasha gurmeesse ofirraa ittise. Gama lachuu namni dhube baay’ee guddaa ture. biifoleen Gadaa isaa raaw’atee Michilleetti dabarse.
Michilleen Gadaa isaa kana keessatti namni diina hin ajjeefne akka hin fuune, akka rifeensa mataa hin haaddanne seera baase. Akka jedhamuttiis bara Gadaa Michillee kana Oromoon fardaan loluu jalqabe. Kanaaf lafa fagoo deemee lola gochuu jalqabe. Bara Michillee kana Galaawudoos waraana isaa Faxagar keessa jiru namicha Hamalmaal jedhamuti kennee bataskaana Imaam gube ijaarutti deebi’ee ture. bara 1555tti Michilleen Hamlmaaliin bakka Dagoo jedhamutti waraanee moohe. Hamalmaal moohamuun Faxagariin guutumatti harka Oromootti deebise. Faxagar Enriif Karrayyuu har’aani taha. Michilleen Faxagar irra dhaabbatee Cafaat, Bazimoofi Daamoot salphatti rukutuu jalqabe. Gibeen qabachuuniis yeroo kana jalqabe. Bara Michillee injifannoo guddaan argame garuu, Islaamootarratti ture. islaamoonni eega Imaam Ahmed boodde weerara guddaa kiristaanatti bobbaasuu hindandeenye. Hatahuu malee, geggeessaan Islaama Harar Amiir Nuur jedhamu humna walitti qabatee bara 1559tti Habashatti duulee ture. amiir Nuur Galaawudoosiin lolee moohe. Galaawudoos lola sanirratti du’e. Amiir Nuur osoo inni injifannoo argatetti gammadee ayyaaneeffachaa jiruu Oromoonni magaalaa Harar seenanii barbadeessan. Oduu kana dhagahee osoo inni gara Harar deebu’utti jiruu Michillee bakka Tulluu Hazaaloo jedhamtutti haxxee hidhee rukute. Lola taherratti Oromoonni haa dhuman malee, Amiir Nuur ni moohame. Waraanni saa harka loltuu Oromoorratti akka dhadhaa baqee dhume. Lubbuun kan keessa bahan xiqqaa ture. lolli Tulluu Hazaaloo biratti tahe kun, yeroo dheeraaf Kiristaanaafii Islaama gidduutti lola deemaa ture addaan kute. Humni Oromoo jabaachuun warra wal lolaa turan gidduutti nagaya buuse.
Michillee booddee duulli Oromoo karaa lamaarraa tahuu jalqabe. Isaaniis:- Oromoota Walloo, Maccaafi Tuulama. Wallo keessati kan Gadaa fudhate Harmuffaa jedhama. Kan Tuulama ammoo, Hambisaa jedhama. Lachuu saanii bara 1563-70tti Gadaarra turan. Hambisaan duula gurguddaa Shawaa keessatti haa godhu malee, Amaara dhiibuu hin dandeenye. Mootiin Habashaa Minaas akka jabatti Hambisaafi Harmuffaa dura dhaabbate. Osoo isaaniin loluu du’e. Malaak Saggad ykn Sarta Dingil kan jedhamu itti dabree aangoo Habashaa qabatee lola itti fufe. Hambisaaniis lafaa haaraya osoo hinqabatin Minas wajjiin lola gurguddaa osoo godhuu Gadaan isaa dhumee Roobaleetti dabarse. Harmuf Awaash cehee Affaarootafi Habashootatti duuluu jalqabe. Gi’orgis Haaylee kan jedhamu bakka qacinaafi Wayaata jedhamutti lolee Moo’e. Affaarootaas lolee naannoo Angootttifi Ganyi jedhamtu qabatee taa’e. Bakka kanarraa Amaara Saaynitiifi Bagamidritti duuluu jalqabe. Harmuuf bara Gadaa isaa Affaaroota, Argoboota, Doobotafi Amaaroota Ganyiifi Angoot keessa turan waraanee of jala galchee gosa moggaase. Harmuuf Affaaroota humna isaanii cabsee baay’ee xiqqeese. Harmuuf Gadaan isaa dhumee Robaleen harka fudhate.
Malaak Saggad Roobalee Shawaa keessatti dabarsuu dhoorke. Ofiis garuu Roobalee dhiibuu hindandeenye. Shawaa keessatti haala akkanaan jiru Roobaleen Walloo Bagamidir seenee lola jalqabe. Yeroo kana Malaak Saggad saffisaan gara Bagaamidir deebi’ee Roobalee bakka wayinaa Dagaa jedhamutti lolee Roobaleen moohame wallotti deebi’e. Roobaleen hoggaa Malaak Saggad gara Bagaamidir deeme, duula Shawaa keessatti jabeessee Amaaroota gara hallayyafi olqatti naqee biyya qabate. Malaak Saggad deebi’ee Roobalee dhiibuu hindandeenye. Gadaan isaanii dhumee lamaanuu Birmajiif bakka gaddhiisan.
Bara Gadaa Birmajii Oromootni Amaara hedduu muddanii qaban. Birmajiin Wallo Bagamidir seenanii Amaaroota hedduu fixan. Aantoot Malaak Saggad lolarratti dhuman. Amaara Bagamidir akka malee hollachiisee. Birmajiin Tuulamaafi Macaa lafa fardi isaa dhaquu dandayu mara deemee qabate. Amaarri gara hallayyaafi holqatti galtee dhokatte. Osoo gaarri, hoqii fi hallayyaan hin jiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture barreeysaan Habashaa Alaqaa Atsimeen. Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe. Birmajiin Shawaa laga Jamayii cehee Waqaa qabatee Amaara lafa Oromoo keessa qubatte Habashaarraa kute. Achirraa Gojjaamii fi Daamoot waraanuu jalqabe. Malaak Saggad nama Daragoot jedhamu akka Gojjaamiin ittisuuf itti erge. Birmajiin lola Daaragootirratti du’e. Haa tahu malee Birmajiin gara dhuma Gadaa isaati jala Gojjaam keessatti moohame. Biramjiin bakka lachuutti Gadaa gad dhiisanii Mul’atatti dabarsan.
Bara Gadaa Mul’ataa kana Walloon hedduu hinduulle. Yeroo lama duwwaa Godaritti duulee saamee Wallotti deebi’e. Qubatee waan taa’e fakkaata. Mula’ati, Maccaafi Tuulama duula isaa itti fufe. Bifa lolaa geeddaree Amaara karaarratti gaadanii ajjeesuu jalqaban. Gaara gidduufi saaqaa dhiphoo ta’an jiddutti eegee Amaara murachuu jalqabe. Kanaaf Amaarri bara sana lafa sodaatu bira hoggaa gahewalitti lallaba, walwaama dabra ture jedhama. Bakka fardasaaf mijjaa’u Gondariifi Gojjaam keessa gulufee basha’e. Boodaas achi qubatee taa’e. Amaarri araarfachuu jalqabdee, suuta suutaan walmakuu jalqaban. Haa tahu malee, lolli isaan jiddu hindhaabbanne: isaan keessa warri gurguddaan:
1661 Oromoonni Walloo Warra Himannoo Gondaritti duulanii Faasilaa Dasiin lolan.
Duula Oromoo kana booddee haala akkamiitu Gaafa Afrikaa keessatti dhalate? Humni Oromoo jechuuniis maal uume? Hamma Oromoon Gadaan of hin jaaranitti miidhaa gurguddaan irrgahaa akka ture beekamaadha. Yeroo sanaas Kiristaanootnifi Islaamootni duula wailrraa hincinne walirratti oofaa turan. Gaafni Afrikaa bakka lolaa turte jechuun nidandayama. Oromoon Gadaan ijaaramee as bahuun, madaala humna Gaafa Afrikaa keessatti jijjiire. I) lola Kiristaanaafi Islaama jidduu nidhaabe. 2) hawwii babal’achuu Habashaan qabu dhaabee walitti isii suntuurse. 3) Oromoo kaba gamaafi sodaatamaa taasise. 3) Mootummaa Islaama Harar dhawee walitti bute. 5) daangaarratti waldhiibuufi lola xixiqqaa tahan malee, nagaya gara jaarraa lamaaf Gaafa Afrikaatti buuse.
Madaalli humnaa kan yeroo dheeraaf ture, kan jijjiiramuu jalqabe walakkaa jaarraa 19ffaa booda eega meeshaan lolaa haarayni harka Habashoota seene ture. Yeroo kanarraa kaaseeti kan Oromoon caphee kolonii Habashaa tahuu kan jalqabe.
Seenaan qorannoo ykn barnoota akka ummanni tokko itti jiraataa tureedha. Seenaan saba tokko yeroo jennu qorannoo ykn barnoota waa’ee shanyii saba saba saniiti jechuudha. Seenaan sabni tokko akkamitti jiraataa ture? Haala akkam keessa dabre? Ogummaa akkam qaba ture? Aadaan isaa maal fakkaata? Kan jedhaniifi gara biraas kaasee deebii itti barbaada. Gabaatti, seenaan qorannoo ykn barnoota haala shanyyiin (sanyiin) ummata biyya tokkoo karaa dina’gdeefi hawaasummaa keessa dabreedha.
Ummanni tokko haala jireenya isaa hubachuuf abbootiin abbootii isaa ykn shanyyiin isaa haala keessa dabran qorachuu barbaachisa. Haalli ykn akkaataan jireenyi shanyii ofii keessa dabre jireenya har’aa irratti calaqqiinsa ni qabaata. Isa ha’aa hubachuuf isa dabre qorachuun barbaachisaadha. Kaleessi yoo hin jiraanne har’i hin jiraatu. Waan shanyiin keenya keessa dabree as gahe qorannee baruun kan har’aa ijaarachuuf baay’ee barbaachisa. Kaleessi har’a, har’i boru maddisiisa. Kan dabre yoo hinhubatin kan har’aa hubachuun, kan har’aa yoo hinhubatin kan boruu qiyaasuun hin kajeelamu.
Maddi seenaa ummata tokkoo inni duraafi guddaan seenaa afaanii(oral history) fi aadaadha. Hamma sadarkaan dagaagina hawaasummaa tokkoo barreeysaan waa galmeessuun hinjalqabaminitti, seenaa dhalootarraa dhalootatti himamsa afaaniitiin dabraa dhufa. Abbaan ijollee isaatti “dur shanyiin keenya akkasiti bulaa ture, bara akkasii rakkina akkasiitu tur, dur jireenyi akkas ture” jedhee yeroo itti odeessu, seenaa dabarsaa jira jechuudha. Sabootni hedduun har’allee afaan isaaniitiin barreeysuu hin jalqabne nijiran. Seenaan saboota akkasii barreeyfamuuf maddi guddaan seenaa afaaniifi aadaa isaaniiti taha.
waan alagaan, waa’ee ummata sanaa barreeyse irraa taha. Ummanni Oromoo afaan isaan kan barreeyssuu jalqabe bara dhihoo keessa. Kanaaf ilma Oromoo tokkoon seenaan isaa galmeeyfamee jira jechuu hindandeenyu. Bara dhihoo as garuu, ilmaan Oromoo tokko tokko seenaa saba isaanii barreeysuuf tattaafataa jiru. Haatahu malee seenaan Oromoo himamsa afaaniifi aadaatiin dhalootarraa dhalootatti daddabraa har’a as gahe jira. Seenaa saba keenyaa qorannee galmeessuuf, seenaan afaaniifi aadaa madda guddaadha. Haa tahu malee, himamsi afaanii lakkuma bubbuluun jijjiiiramaa hiikkaafi ilaalcha adda addaa fudhachaa akka deemu irraanfachuun namarra hinjiru. Har’a seenaa keenya qorachuuf himamsa afaaniitti daballee maddi gara biraa kan seenaa afaan keenyaa (oromiffaa) tiifi antiropolojii taha.
handhuura godhatanii turan. Asiin ammoo, naannoo sanarraa gara bahaatti sossohee Ituufi Humbannatti aanee qubate. Ilmaan Bareentoo keessaa gara kaabaatti fagaatee kan qubate Walloodha.
Godaansi Oromoo kun yeroo kam akka tahe beekuun nama dhibullee jaarraa 9ffaa ykn 10ffaa dura akka tahe beekamaadha. Naannoo jaarraa kanatti Oromootafi Habashoota jidduu (gidduu) wallolli akka ture barreeyfamee jira. Jaarraa kana keessa hoggaa Islaamummaan Shawaa seenuu jalqabe Oromoon akka achi turees waan hubatameedha. Ormoon yeroo lafa kanatti godaane, ummatni gara biraaa irra jiraachuuf dhiisuu irraa wanti beekamu hinjiru. Habarlaand akka jedhutti naannoo Shawaa har’aatti yeroo Oromoon godaane lafti duwwaa turuun nimala jedha. Namichi Poortugaal Franaaz jedhamubara 161tti yeroo naannoo Gojjaamii ka’ee gara qarqara galaanaatti deemu argee akka barreeysetti ” Kibba laga Abbayya keessaa Oromoonni nijiru. Isaaniifi Innaariyaa gidduu garuu, lafti duwwaadha” jedhee ture. Kanaaf lafti Oromoon itti godaanerraa guddaan duwwaa lafa daggala qabu akka ture hubatamaadha.
waarra amantii babal’isuutiin biyya Orooppaarraa dura biyya Habashaa kan dhufan warra Poortugaal turan. Isaan kun jalqabaa jaarraa 17ffaarraa kaasanii Habashaa seenuudhaan dame amantii kristiyaanaa -Kaatolikii babal’isuuf tattaafacha turan. Habashootaaf jaalalaafi maraarfannoo gudda qabu turan. Habashoonni tuqamuufi miidhamuu hinjaalatan turan. Habashoota gara amantii isaaniitti hawwachuuf tattaafataa waan turannif, waan mootoota Habashaa dallansiisu hin barreeysine. Seenaa Oromoo yeroo barreeysaniis akkuma Habashootaatti barreeysan. Namichi Poortugal-Manu’eel de Almeedaa jedhamu, yeroo seenaa Oromoo baarreeyse, Baahireerraa fudhatee ijaa jibbiinsaan barreeyse. Kanaaf waan isaan barreeysan hoggaa xiinxalmuufi kan warra kaanii wajjiin ennaa walbira qabamu seenaa Oromoo barreeysuun nidandayama. Tahaas jira.
Seenaa ummatoota Gaafa Afrikaa warra barreeysan keessaa Arabootiin warra duraati. Keessattu eega amantiin Islaamummaa Gaafa Afrikaatti babl’achuu jalqabe, Araboonni bifa lamaan dehufuu jalqaban. Kuniis bifa amantii babal’isuufi nagadaan ture. Araboonni bifa kanneen keessa tokko ykn lachuutuu, waa’ee Oromoo galmeessanii seenaa barreeysanii jiru. Har’a seenaa Oromoo barreeysuuf qorachuuf maddi tokko barreeysaa Arabootaa taheeti argama. Akkauma haalaafi yeroo isaan barreeysanitti, akkasumas ilaacha isaanirraa kan ka’e, barreeysan isaanii mudaa qabaachuu nidandaya.
Hunda caalaa seenaan Oromoo daagsuufi guddisuuf qoodni qabsoon qabu guddaa akka tahe dagachuun namarra hinjiru. Sadarkaa har’a ummanni Oromoo ABO jalatti hiriiree kallachaa isaa waliin qabsoorra waan jiruuf, waa’ee ummata Oromoo baruuf gaaffiin ka’aa jiran guuddaadha. Har’a waa’ee Oromorratti qormaata guddaatu beektoota bijyya baayyeen godhamaa jira. Keessattu waggaa 10rnan dabranii as qormaatni kun dabalaatuma jira. Kun tolatti kan dhufe utuu hin tahin, dhaabni waa’ee ummata kanaaf falmu waan jiruufi. Qabsoo godhuun seenaa dabaa jiru sirreessuudha dandaya. Dur namootni hedduun maqaa Gaallaa jedhu malee, maqaa Oromoo hin beekan. Har’a garuu maqaan Oromoo jedhu hundaan beekamee jira. Kun bu’aa qabsoo keenyaati.
ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እንዲከበር ያደረገ ደርግ ነው፤ ከዛ በፊት ስራ የተናቀ ተግባር ነበር፤ “ዋይ ዋይ ባላባት እንግዲህ ቀረ ሳይሰሩ መብላት “ ይሉ ነበር የዩኒቨርስቲ ፋኖዎች! ደርግ ስራን አስከበረ፤ አንዳንዶች እንደውም ባንድ ጊዜ ሁለት ስራ ደርበው እሚሰሩ ነበሩ ! ለምሳሌ አትሌት ምሩፅ ይፍጠር ሩጫ ልምምድ ሲ
ፊንፊኔ እና የአገራችን ተጨባጭ የታሪክ ማስረጃዎች